Taageerayaal badan oo Chelsea ah oo ku Farxay Ganaaxa la dul dhigay kooxdooda….(SABAB?) – Gool FM
Byare February 22, 2019
(London) 22 Feb 2019. Taageerayaal badan oo ka tirsan Chelsea ayaa ku farxay go’aanka dhawaan ka soo yeeray FIFA ee ah inaysan wax ciyaartooy ah la soo wareegi karin labada suuq ee soo socota.
Blues ayaa lagu eedeeyay inay si sharci darro ah kula soo wareegtay ciyaartooy badan oo da’yar ah.
Haddaba taageerayaal badan ayaa iminka ku farxay go’aanka lagu ganaaxay kooxdooda iyagoona aaminsan in la gaaray waqtigii ay Chelsea fursad siin lahayd da’yarta kooxda, sida Callum Hudson-Odoi oo wacdaro dhigay kulankii xalay ee Europe League.
Yeelkeede, qaar kale oo yar ayaa aaminsan in kooxdu dhimatay isla markaana wixii markaan ka dambeeya laga raadin doono boosaska hoose ee Premier League haddii aysanba hoos ugu dhicin heerka labaad.
“Chelsea waxay leedahay hannaanka kooxda dhalinyarada ee ugu fiican adduunka, taas oo xaqiiqo ah, aan ku kalsoonaano da’yarteena aana u ogolaano inay kobcaan oo ay hormaraan,” Taageere ayaa sidaa soo qoray.
Ku kalaa yiri: “Waa wixii uu doonayay taageere kasta oo dhab u taageera Chelsea. Hadda waxaan fursad siin karnaa da’yarta waxaana wada ognahay inay fiican yihiin.
“Chelsea waxaa ugu dambeyn lagu qasbay inay isticmaasho da’yarteeda kuwaa oo marna helin fursad dhab ah. Waa wax la moodo inay xun tahay balse waa wax fiican.”. Ku kalaa sidaa soo qoray.
“Ganaaxan wax fiican ayuu ila yahay. Chelsea waxay u baahan tahay inay talaabada wada qwaado isla markaana ay ka fakerto mustaqbalka fog iyadoo ka wada shaqeysiineysa da’yarta iyo ciyaartoyda heerka caalami ay iminka ku heysato shaxdeeda.”.